पुरुषहरुले साँचो मायाँ गरेको कि नाटक ? थाहा पाउने तरिकाहरु पढनुस | Liveekhabar, News Portal website, Nepal No.1 News Portal website, Onlince News Portal website
पुरुषहरुले साँचो मायाँ गरेको कि नाटक ? थाहा पाउने तरिकाहरु पढनुस
एजेन्सी । थोरै मात्र पुरुषहरुले आफ्नी केटि साथीलाई साँचो प्रेम गर्दछन् । धेरै पुरुषहरुको धारणा महिलाहरुसँग मोजमस्ती गर्ने, जिस्कने, उपयोग गर्ने र छोड्ने हुन्छ ।
कुनै पनि महिलाले आफूलाई प्रयोग गरेको सहन सक्दिनन् त्यसैले पुरुषले महिलालाई साँचो प्रेम गरेको हो कि नाटकमात्र गरेको हो त भन्ने कुरा थाहा पाउन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । महिलाहरुले उनीहरुको हाउभाउमा ध्यान दिनु जरुरि हुन्छ ।
तपाईंको कम्मरमा हात राख्नु
आँखा झुकाएर कुरा गर्नु
Newer Postमहाेत्तरीमा हत्याकोअाराेपमा एक महिला पक्राउ थप अनुसन्धान जारी
Older Postविवाह पञ्चमीमा चोरी गर्ने ४५ जना महिलासहित ६३ जना पक्राउ